कोरोनाबाट जोगाउनका लागि थप दुई जीवनरक्षक औषधी भेटिए - बडिमालिका खबर
बीबीसी — कोरोना संक्रमणले जकडेका बिरामीको ज्यान बचाउनका लागि थप दुई जीवन रक्षक औषधी भेटिएको दाबी गरिएको छ । यी औषधी कोरोना संक्रमितको मृत्युदरमा एक चौथाई कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ ।
बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) को इन्टेन्सिव केयर युनिट (आइसीयू) मा यी भ्याक्सिनको ट्रायल गर्ने अनुसन्धानकर्ताले यी औषधी खोपमार्फत् दिइने र उपचार गरिएका हरेक १२ जनामध्ये थप एकजनाको ज्यान बचाउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
विशेषज्ञले यी औषधी बेलायतमा पहिले देखि नै उपलब्ध भएकोले यसको तुरुन्त प्रयोग गरेर सयौंको ज्यान बचाउन सकिने बताएका छन् ।
बेलायतको अस्पतालमा ३० हजारभन्दा बढी कोरोनाका बिरामी छन् । यो आँकडा गत वर्ष अप्रिलको तुलनामा ३९ प्रतिशत बढी छ ।
बेलायत सरकारले औषधी निर्माता कम्पनीसँग बेलायतमा बिरामीका लागि टोसिलुजमेब र सरिलुमेब औषधी उपलब्ध रहोस् भनेर लगातार सम्पर्क स्थापित गरिरहेको छ ।
ज्यान बचाउनुका साथै यो औषधी प्रयोग गरिएका बिरामी चाँडै निको भइरहेका छन् र गम्भीर रुपमा बिरामीलाई पनि एक हप्ता मात्रै आइसीयूमा राखे पुग्ने भएको बताइएको छ ।
प्रतिदिनको अस्पताल खर्चभन्दा कममा औषधीः
दुबै औषधी उत्तिकै असरदार छन् । र यो सस्तो एस्टेरोयड डेक्सामेथासोनसँग अझ बढी असरदार छ ।
यद्यपि, औषधी सस्तो छैन । यसको मूल्य प्रति बिरामी ७५० पाउन्ड (१ लाख १९ हजार रुपैयाँ) देखि १००० पाउन्ड (१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ) को बीच आउँछ जुन डेक्सामेथासोनको पाँच पाउन्ड (लगभग ८ सय) को कोर्सभन्दा कयौं गुणा बढी छ ।
यद्यपि, विशेषज्ञका अनुुसार यी खोप लगाउनुको फाइदा यो हो कि यो आइसीयूमा प्रतिदिन हुने बेड खर्चभन्दा कममा उपलब्ध छ । आइसीयूको प्रतिदिन शुल्क २००० पाउन्ड (३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) छ ।
मुख्य शोधकर्ता तथा इम्पेरियल कलेज लण्डनका प्रा. एन्थनी गार्डोनले भने, ‘हरेक १२ बिरामी जुन यी औषधीबाट निको हुनेछन्, उनीहरुले एउटा जीवन बचाउन सक्नेछन् । यो निकै प्रभावकारी छ ।’
बेलायतमा समेत भिन्न ६ देशमा आइसीयूका करिब ८ सय बिरामीमा रिम्याप–क्याप ट्रायल भयो ।
स्ट्यान्डर्ड केयरमा राखिएका करिब ३६ प्रतिशत कोभिड बिरामीको मृत्यु हुन्छ ।
आइसीयूमा भर्ना भएको २४ घण्टाभित्र नयाँ औषधी दिँदा मृत्युको आँकडा एक चौथाई घटेर २७ प्रतिशत भयो ।
एनएचएसका नेशनल मेडिकल डायरेक्टर प्रा. स्टिफन पाविसले भने, ‘कोरोना बिरामीको मृत्युको आँकडामा कमी ल्याउनका लागि अब अन्य औषधी पनि आइसकेका छन् । यो निकै खुसीको कुरा हो र कोरोनाभाइरसविरुद्ध लडाईंमा एक सकारात्मक कदम हो ।’
सरकारले निर्यातमाथि लगायो रोकः
बेलाष्तका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट हेनककले भने, ‘बेलायतले समय–समयमा प्रमाणित गरिसकेको छ र अझै भन्दै छ कि ऊ आफ्ना बिरामीका लागि सबैभन्दा आशाजनक र उत्कृष्ट उपचार दिन अग्रस्थानमा छ ।’
यद्यपि, यी औषधीले खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ । कोभिड बिरामीलाई अत्यधिक मात्रामा यो औषधी दिँदा यसले फोक्सो र अन्य अंगमा क्षती पुर्याउन सक्छ ।
डाक्टरले डेम्सामेथासोन दिँदा पनि बिरामीको अवस्था गम्भीर छ र जसलाई अत्यधिक हेरविचारको आवश्यकता छ, उनीहरुलाई मात्रै यो औषधी प्रदान गर्न सल्लाह दिइरहेका छन् । टोसिलिजुम्याब र सरिलूम्याब, यी दुबै औषधीको निर्यातमा सरकारले रोक लगाएको छ ।
आशा खोपको : चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज लगाउन शुरु
हिमाली गाउँपालिकाको घर घरमा पुुगे स्वास्थ्यकर्मी, कोरोनाको जाँच तथा परामर्श दिदै